Meizu kwupụtara ụbọchị mwepụta nke Flyme 8 Cape | Gam akporosis
Dị nnọọ ka Huawei nwere akwa oyi akwa EMUI maka gam akporo, Meizu nwere Flyme, interface nke ya nke karịrị na sistemụ arụmọrụ Google na smartphones ya. Onye a ga - enweta mmelite dị ukwuu n’oge na - adịghị anya, yana nke izizi akpọrọ aha ya mere ya si EMUI 9 gaa 10 mbipute na nso nso a.
Flyme nọ na-agagharị na ekwentị ụlọ ọrụ ahụ na mbipute nke 7. otherfọdụ ngwa ọrụ ndị ọzọ meworo okenye ejirila ụdị nke ochie karịa ndị a. Ugbu a Flyme 8 na-abịa, nke ga-eweta ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, nke gụnyere ọrụ na atụmatụ ọhụrụ, anyị amatakwala mgbe anyị ga-amata ha, n'ihi na Meizu ekwuputala ụbọchị ọkwa ọkwa ya, data anyị na-ekpughe n'okpuru.
A na-atụ anya na Flyme 8 ga-abịarute oge ụfọdụ na nkeji nke anọ nke afọ a, oge nke ọnwa Ọktọba, Nọvemba na Disemba. Ọ bụ ya mere eziokwu ahụ bụ na Meizu kwuputara na a ga-ewepụta oyi akwa a n'ime ụbọchị ole na ole bịara bụrụ ihe ijuanya ... Kedu mgbe a ga-eweta ya? Ọfọn, kpọmkwem, ụbọchị nke ụlọ ọrụ setịpụrụ bụ August 13, nke, taa, bụ nanị ụbọchị atọ.
Dabere na ụfọdụ akụkọ ndị ekpuchitere n'oge gara aga, ụlọ ọrụ ahụ amalitela nyocha nke ụlọ nke onye ọrụ Meizu Flyme 8 na-abịanụ na nkeji nke abụọ nke afọ a na usoro nnwale ahụ ga-ejedebe na nkeji nke atọ.
Ọ dị ka ule ahụ agwụla nke ọma ma yabụ onye nrụpụta ahụ dị njikere ime ya ọkwa na August 13. O sina dị, ọ ga-amalite itinye ya n'ọrụ na njedebe dị iche iche nke katalọgụ ya ma emechaa, ya mere, anyị ga-eche ihu na mobile mbụ na Flyme 8 n'ihe gbasara ọtụtụ izu ma ọ bụ ọbụna ọnwa ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu na-ekwuputa ụbọchị ntọhapụ nke akwa oyi akwa Flyme 8 ya